BOB MORTIMER သည် LEICESTER တက္ကသိုလ်သို့တက်ရောက်ခဲ့သည့်ခေါင်မိုးများမှကြွေးကြော်သင့်သည် - သတင်း
Bob Mortimer သည် Leicester တက္ကသိုလ်သို့တက်ရောက်ခဲ့သည့်ခေါင်မိုးများမှကြွေးကြော်သင့်သည်
Bob Mortimer သည်ဤကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်သိသောပျော်စရာအကောင်းဆုံးလူဖြစ်သည်။ ငါလည်းရယ်တယ် တစ်ခါတုန်းကကျွန်တော့်ကိုစကားမပြောချင်တဲ့လူတွေဝိုင်း ၀ န်းနေတဲ့အိမ်ပါတီပါတီရဲ့ထောင့်ထဲကို ၀ င်ရောက်သွားတယ်၊ သူတို့ကငါ့ကိုမသိကြဘူး၊ ငါ့ကိုသိကျွမ်းလို့သူတို့နဲ့စကားမပြောချင်ကြဘူး။ ရုတ်တရက်အားလုံးမျှော်လင့်နေသောမိန်းကလေးတစ် ဦး သည်ရည်းစားနှင့်စကားများပြီးနောက်ပါတီမှထွက်သွားသည်။ ငါ 'ငါတို့အခုမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးလို့ငါထင်တယ်' လို့ပြောခြင်းအားဖြင့်တိတ်ဆိတ်မှုကိုထိုးဖောက် လူတိုင်းတကယ်တော့မြည်တမ်းနေကြတယ်။ အဆိုပါကြွက်သားယောက်ျားလေးများငါ့ကိုချီနှင့်ဒိုင်းကဲ့သို့ငါ့ကိုလေထုထဲတွင်ငါ့ကိုပစ်စတင်။ ထောင့်မှမိန်းကလေးများသည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုသုတ်သင်လိုသည့်အလားခက်ထန်စွာကြည့်ကြသည်။ သူမမှာ Beyonce ဖြစ်သည်။ My Nan ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ထောင့်မှာလည်းသူမရယ်မောမှုကြောင့်တတိယမြောက်နှလုံးရောဂါဖြင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
ထို့နောက်ငါနံနက် ၄ နာရီတွင်တစ်ယောက်တည်းထ။ အပြည့်အ ၀ ဝတ်ဆင်ထားသော၊ နွေးထွေးသည့် Carling ကိုကျွန်ုပ်၏အိပ်ရာဘေးစားပွဲပေါ်မှထလိုက်သည်။ Bob Mortimer ၏ dulcet tones သည်ကျွန်ုပ်၏နားများကိုတန်းစီပြီး 'Athletico Mince' အပိုင်း ၄ သည်နာရီဝက်အချိန်အတွင်းရောက်သည်။ ငါနိုးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကတော့ lager ဟာအေးတယ်။ Mince ရဲ့ ၃၇ ကြိမ်မြောက်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုလုပ်နေတယ်။ အိပ်မက်ကကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် Bob ဆီကနိုးထလာတာထက်စာရင်ပိုဆိုးတာကငါသေချာပေါက်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
Bob Mortimer သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် Leicester တက္ကသိုလ်၏ကျောင်းသားဟောင်းတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ငါ Bob ကအင်တာဗျူးအတွက်ရရှိနိုင်ပါ့မလားမေးရန်စဉ်းစား, သို့သော်ငါဒုနှင့်အတူလုပ်ခဲ့တယ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်သူ့ကိုတုံ့ပြန်ရန်အဘို့အခြောက်လကြာပုံရသည်။ ဒါကြောင့်အဆုံး၌, ငါ arsed နိုင်ဘူးဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အများဆုံးနာမည်ကြီးနှစ်ဆလုပ်ရပ် 'Vic နှင့် Bob' ၏ထက်ဝက်အဖြစ်လူသိများ, Mortimer စစ်ပွဲမှာမိသားစုများနှင့်အတူ 1998 ခုနှစ်တွင်တစ် ဦး ချုပ်အချိန်ကာလဘီဘီစီ 1 slot ကအတွက်အထှတျအထိ, 1990 ရဲ့ telly မှတဆင့်လွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်၏ Beacon ချီတက်။ ထိုစုံတွဲ၏ CV တွင် 'Shooting Stars'၊ 'Vic နှင့် Bob ၏ Big Night Out' အပြင် 'Reeves and Mortimer ၏အနံ့' များလည်းရှိသည်။ ဤအမည်များသည်သင့်အတွက်များစွာအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်မည်မဟုတ်သော်လည်းမည်သူမဆို Bob Mortimer နှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုစစ်ဆေးရန်ဤဖတ်နေသူမည်သူ့ကိုမျှမတောင်းပန်ပါ။ ၎င်းကိုအောက်ခြေလိုင်းဟာသအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်လူအများစုကဟာသဉာဏ်ထက်မြက်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်အလွန်ထူးဆန်းသည်။ Mortimer ကိုယ်တိုင်သူ၏ 'Desert Island Discs' ဇာတ်လမ်းတွဲတွင်သူသည်လူရွှင်တော်များ၊ လူထုံများကြိုက်နှစ်သက်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုခဲ့သည်။ Mortimer ၏ဟာသသည်အများပြည်သူဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးသမားများအားသရော်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်လူတိုင်းကိုသရော်စာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ပရိသတ်ကသူ့ကိုသံသယ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုပေးပြီးအလွန်ထူးခြားတဲ့ကမ္ဘာသို့ခြေလှမ်းကြိုးစားရန်ပရိသတ်ကိုလိုအပ်သောကြောင့်ဘော့ကသူ၏ဟာသကိုတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သည်ဟုအကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့သည်။ ငါ Bob ရဲ့ဟာသတကယ်တော့အလွန်အားလုံးပါဝင်နိုင်ကြောင်းငြင်းခုန်လိမ့်မယ်။ လက်ရှိအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း။ မည်သည့်စာသားသို့မဟုတ်မည်သည့်အသိပညာမျှမလိုအပ်ပါ။ သင်သည်ကလေးဆန်သည်ဟုခံစားရခြင်း၏တားဆီးခြင်းသို့မဟုတ်ရှက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာမန်ထက်ထူးကဲသောခံစားမှုဖြင့်သာပျော်မွေ့ခွင့်ပြုရုံသာဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Le Corbussier et papin နှင့် 'Cottage Cheese' ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ပါ။ သငျသညျစာသားသာ fart သည်အဘယ်သို့နှင့်အိမ်တွင်းဒိန်ခဲပုံကြမ်းရယ်စရာရှာတွေ့မှသိရန်ရှိသည်။
ရုပ်ပြများ 'ဒီလောက်ရယ်စရာမကောင်းဘူးလား ... ? ဤနည်းသည်လူမျိုးစုခွဲခြားခြင်းနှင့်အသွင်သဏ္pesာန်တူခြင်းများကိုရွေးချယ်သောလူစုလူဝေးကိုသူတို့၏လူမှုရေးအနေအထားသို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးအရအမှီသဟဲပြုခြင်းကို အခြေခံ၍ ရယ်မောစေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်တော့၎င်းသည်ရယ်စရာမဖြစ်ခြင်းကိုလျော်ကြေးပေးရန်မည်မျှဥာဏ်ပညာနှင့်သိနားလည်မှုကိုပြသရန်ကြိုးစားနေသူကိုနာကျင်စေသည့်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ Mortimer က 'Desert Island' discs အင်တာဗျူးမှာနောက်ထပ်ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ သူငယ်ချင်းအုပ်စုငယ်များသည်စူးစမ်းလေ့လာရေးဟာသလုပ်နေသည့်အရက်ဆိုင်များတွင်ထိုင်နေကြသည်ဟုမထင်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်ငါ Mortimer ရဲ့ဟာသက ... လျှင်ရယ်စရာဖြစ်မဟုတ်ဘူး, မေးခွန်းမေးတယ်ယုံကြည်? ။ ဤမေးခွန်းသည်လူတို့အားဇွန်းဖြင့်ကျက်စားသောထင်မြင်ချက်များနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များဖြစ်မည့်အစားသူတို့၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်မပြုပါ။
မျှဝေသည် Bob Mortimer 7:51 pm တွင် PDT မှာအောက်တိုဘာ 30, 2019 ရက်တွင် (@realbobmortimer)
အဘယ်အရာကို 2020 ပဟေinိဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်၏ရည်းစားဟောင်းသည်သူမသည်ကျွန်ုပ်ထက်သာလွန်သောလူသားဖြစ်ကြောင်းမှန်ကန်စွာသဘောပေါက်လာသည်။ ထို့ကြောင့်သူမကသူမငါနှင့်အတူထွက်မသွားချင်ကြဘူးကြောင်းအပြန်အလှန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်သူမ၏အပြစ်တင်နိုင်ပါတယ်မထင်ကြဘူး။ ငါလူတန်းစားလူသားတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းကိုငါ့ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အတည်ပြုသောမြင်သာထင်သာဖြစ်ရပ်နှင့်အတူအသုံးအနှုန်းများမှလာမယ့်သိသာအတော်လေးစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း၏ (၆) လအခိုင်အမာပြောဆိုမှုကို 'Athletico Mince' ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော Podcast တခုကိုနားထောင်ရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ခဲ့သည့်ထင်ယောင်ထင်မှားကိုဖန်တီးရန်ငါ့လက်ချောင်းထိပ်များ၌ကျွန်ုပ်နှင့်စကားပြောရန်စိတ်ကူးသည်နှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေသည်။ အဲဒီအသံတွေကကျွန်တော့်ကိုနှစ်သိမ့်စေရုံသာမကအစာအိမ်နာကျင်တဲ့အထိရယ်မောစေခဲ့တယ်။ ငါအဖြစ်မှန်ကနေ detach လုပ်လိုက်သောကမ္ဘာကြီး၌စွဲလန်းနံနက်စောစော၏နံနက်ယံ၌မှတဆင့်ထိုင်ချင်ပါတယ်။ ယခင်အင်္ဂလန်မန်နေဂျာစတိဗ်မက်ကလာရန်သည် Casper ဟုခေါ်သောအဝါရောင်မြွေကိုပိုင်ဆိုင်သောကမ္ဘာ၊ Mortimer သည် Alderman မြို့နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ပြီးရောဘတ်မူဂါဘီ၏ knackers များသည် 'လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောတံခါး' နောက်ကွယ်တွင်ကြည့်ရှုရန်အတွက်ရရှိနိုင်သည်။ ငါပြပွဲကနေဒီဥပမာကိုရေးချအမျှငါသင်အရင်က Mince ကိုနားမထောင်ကြလျှင်သူတို့ကရယ်စရာအသံမပြုစေခြင်းငှါငါနားလည်သဘောပေါက်။ Mortimer ၏နှုတ်ထွက်စွမ်းရည်သည်ကျွန်ုပ်၏ပြီးပြည့်စုံသောရှင်းပြနိုင်စွမ်းကိုသိသာထင်ရှားစေသည်နှင့်အမျှ ထပ်မံ၍ ငါလုပ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်အားတိုက်တွန်းပါသည်။
ငါ uni မှာတစ် ဦး တည်းခံစားရရန်တစ်ခုတည်းသောလူတစ် ဦး မဟုတ်ပါဘူး။ ငါတက္ကသိုလ်တက်တဲ့အခါငါဘယ်သူ့ကိုမှမတွေ့ခဲ့ဘူး၊ ငါအရမ်းအထီးကျန်ခဲ့တယ်၊ အခန်းထဲမှာထိုင်နေတာပဲ။ ဤသည်မှာ Mortimer ၏ Sussex တက္ကသိုလ်၌သူ၏အချိန်နှင့် Leicester ၏ Uni မှာမိမိသခင်၏လေ့လာမှု၏အကျဉ်းချုပ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သူ၏ 'Desert Island Discs' ဇာတ်လမ်းတွဲသို့သွားရန်ဘော့သည်သူ၏ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်နေ့ကိုပြန်ပြောပြသည်။ ထိုတွင်သူနှင့်သင်တန်းတက်ဖော်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှုတ်ခွန်းဆက်ခဲ့သည်။ သူသည်လူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟုထင်မြင်သောဒင်းနစ်ဂျာကင်အင်္ကျီနှင့် Middlesborough Football top တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ သို့သော် function ကိုမှာလူတိုင်းအနက်ရောင်လည်စည်း၌ရှိ၏။ ဤကဲ့သို့ခုန်ပေါက်နေသောကလေးငယ်များသည်မိဘများအားသူတို့၏ကြွယ်ဝသောနောက်ခံကြွက်သားများကိုကြိတ်ရန်ညစာစားဝတ်စုံကိုဝယ်ယူရန်မိဘများကိုခေါ်ဆောင်လာသည့်ကလေးငယ်များသည်ယနေ့ခေတ်တက္ကသိုလ်တိုင်း၌အဆန်းမဟုတ်ချေ။ ဤအတွေ့အကြုံမှ Bob ခံစားခဲ့ရသောအထီးကျန်ခြင်းခံစားချက်သည် uni's ကျောင်းသားအများစုအတွက်ဘုံဖြစ်လေ့ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်ရှက်ခြင်းကကျွန်ုပ်ဘဝ၏ပထမနှစ် ၃၀ ကိုအမှန်တကယ်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာအထီးကျန်နိုင်ပါတယ်, တစ် ဦး ထိတ်လန့်အရာပါပဲ။ ကျောင်းသားများစွာကဲ့သို့ပင်ဘော့၏လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ရှက်စိတ်ကတက္ကသိုလ်ဘ ၀ ထက်မကခံစားရန်သူ့ကိုတားဆီးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အသက် ၇ နှစ်အရွယ်တွင်ဖခင်ဖြစ်သူဆုံးပါးသွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုသူယုံကြည်သည်။ ထိုအချိန်ကသူသည်၎င်းကိုသူ့အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုမယုံကြည်သော်လည်းပြန်ပြောင်းကြည့်ရမည်ဆိုလျှင်သူ၏ဖခင်သေဆုံးခြင်းသည်သူ၏ဘ ၀ ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်ကြောင်းသူနားလည်ခဲ့သည်။ အဖိုးတန်သောအရာတစ်ခုကိုသင့်ထံမှယူသောအခါ၎င်းသည်သင့်အားအလွန်လုံခြုံမှုမရှိစေသည်။ လူမှုရေးစကားရပ်၏ပြည်သူ့ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ဘော့၏အခြေအနေထက် ပို၍ ဆိုးသောအရာသို့မဟုတ်အမြစ်တွယ်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ တက္ကသိုလ်၌အခြားသူများအားလုံးသည်သူတို့မဟုတ်သောအရာ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ဟုလူအများခံစားရလေ့ရှိသည်။
မျှဝေသည် Bob Mortimer (@realbobmortimer) ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်၊ ည ၁၂ နာရီ ၅၀ မိနစ်၊ PDT တွင်
ဟုတ်ပါတယ်, Bob ရဲ့ဟာသနှင့်ဟာသငါ့ကိုအားပေးမှုငါ့အကောင်းဆုံးအားထုတ်မှုရှိနေသော်လည်းလူတိုင်းအတွက်မကျမည်အကြောင်း။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာဘော့သည်ပြင်ပမှပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကိုယ်စားပြုသောအရာသည်ဘဝ၏မည်သည့်နယ်ပယ်၊ အထူးသဖြင့် uni ကိုနားလည်ရန်သော့ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဘော့သည်သူ၏ကြောက်ရွံ့မှုများကိုကျော်လွှားခဲ့ပြီးလူအများရှေ့တွင်သူ၏စိတ်ကိုစပြောခဲ့သည်၊ စာရေးချိန်တွင်ဆယ်စုနှစ်သုံးခုနီးပါးသက်တမ်းရှိသည့်လူရွှင်တော်ဂိုဏ်းသူရဲကောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့သာအနည်းငယ်သာ Mortimer ရဲ့ကဲ့သို့တူညီသောစကေးအပေါ်တစ် ဦး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ချိန်ကအဆင်မပြေနှင့်ဘေးဖယ်ခံစားခဲ့ရသူတစ် ဦး ကိန်းဂဏန်းတစ်ခု၏အောင်မြင်မှုနှင့်ကြည်ညိုလေးစားမှုကိုမည်သည့်တက္ကသိုလ်မှမဆိုအောင်မြင်သင့်သည်။ ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတ္တဆန်သောအစီအစဉ်ကိုဘော့၏ဖိနပ်ထဲသို့ထည့်ရန်ဖြစ်လျှင်ငါကြီးမားသော fuck ဆိုတဲ့ရုပ်ထု, ဒါမှမဟုတ်ဒေးဗစ် Wilson Wilson စာကြည့်တိုက်၏မျက်နှာစာပေါ်သို့ Bob ရဲ့မျက်နှာ၏ရုပ်ပုံကိုချွတ်ကြီးမားသော fuck ဆိုတဲ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ချင်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Bob သည်သူကိုယ်တိုင်နားလည်သဘောပေါက်။ ပါးနပ်စွာနူးညံ့သိမ်မွေ့သောနည်းလမ်းဖြင့်ပျောက်ဆုံးသွားသောပိုင်ဆိုင်မှုရုံးခန်းရှိအဆောက်အအုံတစ်ခုခုကိုတောင်းခံလိမ့်မည်။